Cool Mazano Kubva Semalt On Nzira Yokudzivisa Dhinda Rega Spam Kubva Pako Logyo Files
Iyo inozivikanwawo se log spam, referrer spam inzira inonzi spamdexing iyo inosanganisira kugadzira zvikumbiro zvepaiti yakawanda uchishandisa URL yakaipa. Spammers vanoshandisa fake referrer URLs kutumira zvikumbiro kunzvimbo dzavanoda kuzivisa. Mukufamba kwenguva, vashambadzi vanoguma vachiwana mari yakawanda yemari pamusoro pekutengesa mari.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutengi, anotaura kuti munyika yanhasi yezvakagadzirwa nehuwandu hwekutengeserana, nhamba yakakosha yefererer spam inozivikanwa zuva nezuva. Mushure mekutsvaga mapepa emafaira, spam inoita kuti logiti yako irege kushandiswa uye isingabatsiri - 1 1 internet hosting. Kana zvasvika pakushambadzira kwekudhijita, mafaira eefodhi anotamba basa rinokosha zvikuru nekubatsira webmasters kuti aongorore nhamba yevatengi vanoshanyira nzvimbo yavo uye nguva yechirongwa.
Nzira yekutumira spam mabasa
Kutora kweGoogle pakutumira spam kunooneka. Zvave zvichinyorwa semhando yemafuti, Google inotonga webmasters uye mablogiki vachishandisa ruzivo rweterer spam kuti vawedzere mutambi kune mawebsite uye vanyore yakakwirira mumagetsi ekutsvaga injini. Mukati yapfuura yapfuura, vamwe mablogiki uye webmasters vakaratidzirwa vanotumira pane peji rimwe rewebsite dzavo. Nokuda kwechikonzero chinonyatsozivikanwa kune ma blogger, rwandu rwemangwana rekutsvaga rwakave rutivi rwemamwe nzvimbo.
Vashambadzi vanounganidza zviri mumapeji avo vanoshanyira zuva rega rega kuti vaonekwe. Nhamba yakawanda yekutsvaga injini tsvina inoshandisa kubudiswa kwechikwata kuongororwa mawebhusayithi nokuda kwekushandura mazwi. MaWebmasters uye mablogi anoshandiswa nemamiriro ezvinhu achifunga kuti URL yekutsvaga yakabatana yakabatanidzwa mune zvayo inowedzera zvinhu zvakanaka zvekukosha..Nechinangwa chekuendesa mberi kune nzvimbo dzavo, vatengesi vanoshandisa software yekushanyira mapeji uye masayiti vachishandisa fake referrer header.
Vashanyi vanoita skew vanorondedzera vachirondedzera kuti vashandi vanogona sei kuwana peji, nguva yekugadzirira nguva, uye nhamba yevashanyi chaivo vakagamuchirwa. Sezvo mutengesi, unogona kuguma uchiona nzvimbo dzako dzichidonha zvakanyanya semugumisiro wekushandisa log spam. Muzviitiko zvizhinji, Google inobvisa zvachose webmasters inoshandisa mikana yakasviba neyekudzidzira kubva panzvimbo yekutsvaga injini.
Kuchenesa referrer spam kubva kuefodhi dzako
Kushandisa risina kunyora index reference reference
Webmasters nevatengesi vezvakagadzirwa vane maitiro avanofarira ekubvisa tarisa spam. Kushandisa kwekunyoresa index reference reference kune imwe chete. Usaratidza kana kusanganisira kutumira kune mapeji ose anowanika pawebsite yako. Nokukundikana kusanganisira kurererisa spam pamapeji ako epaiti, injini dzinotsvaga dzichaudzwa kuti dzisava nehanya newe.
Kushandisa .htaccess file
Kana wawana URL yakakanganisika pane webhusaiti yako, funga kupa .htaccess configuration file kudururwa. Iyi sarudzo yefaira isingasviki uye inovhara log spam kubva pawebsite yako. Kuti uite a .htaccess file pawebsite yako, shandisa Apache nekunyorera-nyora. MaWebmasters achishandisa .htaccess file nyore nyore kudzivisa spam inotangira kubva kune zvinonyadzisira, kubhejera, mari kana chero imwe nzvimbo yakananga.
Dzimwe nzira dzakagadzirirwa kubatsira vablogi uye vatengesi block referrer spam. Kubatanidzwa kwe .htaccess configuration file uye kwete-indexable referral log log inoshanda zvakakwana kune vakawanda webmasters uye vatengesi vedhizha. Usarega kutumira spam kuti ipe log yako yefaira isingabatsiri. Shandisa zvinotsanangurwa pamusoro apa maitiro ekudzivirira referrer spam.